Bile Mohamed – Page 3 – Shabakadda Somalibile Media
Author Archives: Bile Mohamed
FARIIN KU SOCOTA GUDDIGA DOORASHOOYINKA SOOMAALIYA.
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Nin Adduunyo joogoow maxaa aragti kuu laaban”, in badan oo ka mid ah guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan lixaadkoodu dhammeen marna ma aysan filanayn in mas’uul ku hadlaya magaca guddiga doorashooyinka dalka ama kan Qaranka inuu af-lagaadeen, masabidasho iyo ku jees-jeesid kula dhaqaaqo dadka naafadda. Kadib kullan lagu soo bandhigayay heerka uu marayo diyaar ...
Maxay dowladda Soomaliya ka tiri eedeen uga timid hogaamiyaha Xisbiga Wadajir…?.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay gaashaanka u daruurtay eedaha ah in ammaankii dalka uu faraha ka baxay, waxa ayna sheegtay inay har iyo habeen ka shaqeeyaan sugidda amniga dalka. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya kaddib shir jaraa’id oo uu maanta magalada Muqdisho ku qabtay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Wadajir ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isla markaana uu ku sheegay in Al-Shabaab ay ...
Xubno sare kana tirsan IGAD oo kormeeray xarunta doorashada Jubaland.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland ayaa ku waramaya in Wafdi sare kana socday urur goboleedka IGAD ee xaqiiqa raadinta u joogay magaaladaasi inay kormeer indha-indheyn ah ku tageen hoolka cusub ee loo diyaariyay doorashada. Sida wararku sheegayaan xubahani waxay sidoo la kulmeen qaar ka mid ah Odayaasha Kismaayo. Waxaa kormeerkooda ku wehelinayay guddiga madaxa bannaan ee ...
Madasha shaqo abuurka oo daahfuray shaqaalaha koonfurgalbeed.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Koonfur galbeed Soomaalia ayaa maanta daahfurtey Madal loogu magac darey Madasha Shaqo-abuurka Konfurgalbeed Soomaaliya, oo ay ku bahoobeen 9 Wasaaradood oo ah Wasaaradaha Shaqa-abuurka ku shaqada leh. Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha iyado hirgelineysa Siyaasadeeda ku aadan in la abuuro 4000 oo shaqo (4sano) ee soo socota, Wasaaradu waxey dardar gelineysaa Hawlaha Shaqo-abuurka u leh Deegaanada Koonfur ...
Masaajidka Towfiiq Islamic Senter oo xujey Soomaaliyeed u diray magaalada Makah+SAWIRO..
Iyadoo lagu guda jiro gudashada acmaasha xajka isla markaana malaayiin Muslimiin ah isku diyaarinayaan sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada Barakeysan ee Maka Al-mukarama, ayaa masaasidka towfiiq Islamic senter magaalada Oslo ee dalka Norway oo ah masjidka ugu weyn Soomaali ku leedahay dalkani, waxaa u suurtagashay inay sanadkaan u fududeeyaan in ka badan 80 qof kuwaasoo isugu jira ragg iyo ...
Magaalada Muqdisho waa caasimada dalka Soomaaliya waxayna u dhaxeysaa guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed laakiin waxa maanta iyo sanadihii u dambeeyey ka socda waa Shar iyo Khayr is garab ordaya, waana hadba midka uu EEBBE weyne kuu qadaro kuuna soo hormariyo. Haddii aan dhinaca wanaaga iyo khayrka ku daahfuro inagoo og inay dhiig baxayso dilkuna uu joogto yahay macnooyin fara badana ...
Injineer Yariisoow oo ku geeriyooday isbitaalka Hamad ee magaalada Doxa.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Doxa ee dalka Qadar ayaa sheegaya in Isbitaalka Hamad ee magaaladaasi uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa caasimada Marxuum Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisoow) kaasoo sababsaday dhaawac daran oo ka soo gaaray qarax dhawaan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Ku dhawaad todobo maalmood oo xaalada caafimaad ee Guddoomiyihii gobolka Banaadir lala ...
Xil: Jeesoow “Shabaab marna idin cafin maayaan xukunkiinuna waa dil…”.
Daahir Amiin Jeesoow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa cod dheer ku sheegay in xoogaga hubeysan ee Al-shabaab sina ku cafinayn ergadii soo dooratay xildhibaanada uu isagu ka midka yahay. Ururka Al-shabaab ayaa dhawaan soo saaray awaamiir ay odayaasha kaga dalbanayaan inay cafis weydiistaan isla markaana u tagaan Al-shabaab si ay uga noqdaan go’aankii hore ay ku ...
Kheyre iyo guddiga shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo wada kulmay
Xasan Cali Kheyre Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dibuheshiisiinta maamulka Galmudug oo kasoo laabtay socdaal ay ku mareen deegaannada Galmudug. Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta qorshaha dib-u-heshiisiinta Galmudug iyo ka mira dhalinta shirweynaha Dhuusamareeb ka furmaya August 05/2019 ee la isugu keenayo dhammaan beelaha Galmudug si la isugu diyaariyo dhismaha Galmudug loo dhanyahay. ...
Wasiir sheegay inuusan cidna marti uga ahayn magaalada Kismaayo.
Mid ka mid ah golaha wasiiradda Xukuumadda Kheyre ahna musharax madaxweyne maamulka Puntland Mudane Maxamed C/laahi Oomaar ayaa sheegay in uusan cidna marti uga ahayn tegida magaalada Kismaayo oo la filayo inuu halkaasi kaga dhawaaqo musharaxnimadiisa. Dhowr todobaad oo hore ayaa baaqasho ku timid safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo taasoo qeybaha kala duwan ee bulshada siyaabo kala duwan ...